Soo dejisan Avira AntiVir 15.0.15.129 Free... – Windows – Vessoft
Soo dejisan Avira AntiVir
Avira AntiVir – software caan ah antivirus loogu talagalay in ay ilaaliyaan nidaamka fayrusyada ka. software The awood u tahay in la helo iyo ka saari fayrusyada, Trojans, Gooryaanka, spyware, xayeysiis block, iwm Avira AntiVir ka kooban module gaar ah si loo joojiyo aalado network iyo xaddido helitaanka si websites dadka waaweyn. software The awoodo in la soo celiyo computer galay gobolka ka shaqeeya in ay dhacdo nidaamka fashilka adigoo isticmaalaya shaqo soo kabasho. Avira AntiVir kuu ogolaanayaa inaad dhigay markii loo baahdo si scan nidaamka by jadwal ee jadwaliye ka dhisay-in.
ilaalinta ku ool ah fayrusyada kala duwan
aalado Network xanibeen
Celisay nidaamka lacala failure
Avira AntiVir Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Auslogics Anti-Malware 1.8
العربية, English, Español, Português... Mp3tag 2.79
Українська, Français, Español, Deutsch... Eeg software more